အခမဲ့ Xxx ဂိမ္းႏွညမ်းအွန်လိုင်းဂိမ်း
ဒါကမေးခွန်းကောင်း! ဒါကြောင့်လည်းအတော်လေးခက်ခဲ။ အကြှနျုပျတို့စတင်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းတစ်ဦးအချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အချိန်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်လူတိုင်းနားလည်သဘောပေါက်သင့်ပါသည်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကို၏ဤလောကအတွက်ဆှအွန်လိုင်းလိင်ဂိမ်းများ။ ကျနော်တို့ကသတိရအများစုကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအခါ"အကောင်းဆုံး"အွန်လိုင်းညမ်းဂိမ်းတွေဟာရိုးရှင်းတဲ့မီးေ embeddings အပေါ်အရိပ်ရတဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကိုအကြောင်းမရှိသလောက်တင်ဆောင်ယူအချိန်အများကြီးဘယ်လိုထွက်တွက်ဆဖို့သူတို့အလုပ်လုပ်ခဲ့။, ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာကြီးမားလှတဲ့လုပ်ငန်းကိုအနုအားကစားစစ်မှန်သောအွန်လိုင်းညမ်း၊နှင့်ပှငျ့ပှငျ့၊မရှိခဲ့ဖူးမှပိုကောင်းတဲ့အချိန်ကလောင်၏ဤအမျိုးကိုအကြောင်းအရာ။ ဒါဟာကြောင်းသေချာစေရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်သောသူလူတိုင်းအသုံးပြုမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုရရှိမိမိတို့လက်ကိုအပေါ်အကောင်းဆုံး XXX အရေးယူမှကြွလာသောအခါအွန်လိုင်းလိင်ဂိမ်းများ။ ဒါကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအွန်လိုင်းညမ်းဂိမ်းများများမှာလုံးဝအလိုက်အတိအကျဤရည်မှန်းချက်။
ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအွန်လိုင်းလိင်ဂိမ်းများကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ကစားအဆြးေႏြးလိင်ဂိမ်း–သို့မဟုတ်လိင်ဂိမ်းများ။ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့သည်ပြီးတိကျတဲ့ညွှန်ကြားချက်များမပလွံဒီအစိတ်အပိုင်းများပြန်လည်သုံးသပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်:အရေးအကြောင်းသင်အမှန်တကယ်ကြိုးစားနှင့်ပျော်မွေ့အားလုံးဒီကားဂိမ္းအမီအကြံပြုသောကမ္ဘာသို့ဤအရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲကြိုးစားနေမြတ်ကြ၏။, ငါတို့အသင်းကတော့သွားအားဖြင့်တစ်ဦးစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း၏အဓိကဒြပ်စင်အသီးအသီး၏အရွယ်ရောက်ပြီးညစ်ညမ်းဂိမ်းနှင့်ရန်ဆုံးဖြတ်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းဤအထူးသဖြင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုလုပ်ဆောင်မှနှိုင်းယှဉ်ယှဉ်ပြိုင်။ ထိုအခါသာထို့နောက်အသင်းအဖွဲ့ဝင်များရေးထားမည်အကြောင်းသူတို့အတွေ့အကြုံနှင့်အတူလိင်ဂိမ်းနှင့်ဆုံးဖြတ်လျှင်ကောင်းသည်။ တစ်ချိန်ကဤအမှုကိုပြုသောဖြစ်ပါတယ်၊ကျနော်တို့ကစစ်ဆေးအရာအားလုံးကိုထပ်ပြီးတော့တင်၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအွန်လိုင်းညမ်းဂိမ်းအပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်! အားလုံးဤအဆင့်များလိုအပ်သေချာစေရန်သာအထွက်အများဆုံးရရန် XXX ဂိမ္းေဖ်ာ္ေျဖေရး။, မှကြွလာသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ဂုဏ်သတင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်သွား–လူတိုင်းသိတယ်ဤသည်သာအမှန်ဝက်ဘ်ဆိုက်အခါသင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေပါတယ်အလွန်ကြီးစွာသောအရွယ်ရောက်ပြီးညစ်ညမ်းဂိမ်း!
ကျနော်တို့အပေါ်မှာပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်အခမဲ့ညစ်ညမ်းနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောငွေကြေးနည်းလမ်းများ-အလားတူလုပ်ဆောင်ချက်၏ထုတ်ကုန်များကဲ့သို့အသကြားလုံးနှိပ်စက်ခြင်းနှင့်လမ်းကြောင်းနှင်။ သို့သော်၊အချို့ယံလိင်ဂိမ်းများဘယ်မှာငွေသားလိုအပ်သည်သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုကစားရန်၊နှင့်အရာကျနော်တို့အကြံပြုပါသည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကပူဇော်စိတ်ဝင်စားစရာအရောနှော၏အွန်လိုင်းညမ်းဂိမ်းအပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ ၏သင်တန်း၊သင်သင်သည်အဘယ်သို့များအတွက်ပေးဆောင်၊ဒါပေမယ့်အကြောင်းဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံပြုချက်များအခမဲ့ဂိမ်းများပေမယ့်ဘာမှမဖြစ်ကြပြီးပြည့်စုံသော။, ကျနော်တို့အစဉ်အမြဲအလွန်ဂုဏ်ယူကြောင်းပင်ကစားသမားအခမဲ့ဂိမ်းများရှိသည်နိုင်အဖြေအစည်းအဝေးများ၏အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံး။ လုံလောက်အောင်ပြောရန်သောဤအွန်လိုင်းလိင်ဂိမ်းများငါပေးမည်၊ကိုယ့်ထက်ပိုအကူအညီ! မှတ်ချက်၊သို့သော်၊သင်လိုအပ်သောဖန်တီးရန်အကောင့်တစ်ခုအတွက်အဲဒီအချို့ကိုလိင်ဂိမ်းများ၊သင်အတွက်ပေးချေရန်ရှိသည်။ သင်ကသာအသုံးပြုလွာင္သိမ္းဆည္းနှင့်အခြားရည်ရွယ်ချက်များ။, သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊သင်သည်လည်းသုံးနိုင်သည်အရေးမပါအီးမေးလ်၊ဒါပေမယ့်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေခဲ့ကြနှောက်ယှက်တော့ဝေးကြပြီမဟုတ်ခဲ့တစ်ခုတည်းသောပြဿနာနှင့်အတူငါတို့အကြံပြုချက်များ၏အွန်လိုင်းကားအားကစားပြိုင်ပွဲ!
ရိုးရိုးသားသား၊ကြောင်းပေါ်မူတည်သင်သည်အဘယ်သို့သောပျော်မွေ့! ကြီးစွာသောအရာဒီနေ့ရဲ့ညမ်းဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းသင်ရှာဖွေမရှိမဖြစ်လိုအပ်မည်သည့်မျိုးလိင်ဂိမ်းသင်ကြိုးစားချင်စေခြင်းငှါ။ အချို့လူများကချစ်အရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့မဟုတ်ဘဲသူတို့အတွက်မိမိကိုယ်ကိုရှာတွေ့သစ်တစ်ခုမြို့နှင့်လိုအပ်လတ်ဆတ်သောလာျ။ ထို့နောက်ဆောင်ရွက်ရန်အမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုများ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အလေးရုပ်သိမ်းပေးရေး၊လာရောက်လည်ပတ်၊အားကစားရုံနှင့်အားကစားလုပ်နေ–အားလုံးကိုရှာဖွေဘို့အစုံလင်သော။, ကျွန်တော်လည်းသတိထားမိမားတဲ့အရေအတွက်တိုးလာ၏ဂိမ်းများနှင့်အတူအဓိကအသင်ျ။ အားလုံးအပေါ်မူတည်မိသားစု-ဖော်ရွေလုပ်ရပ်တွေခံစားနိုငျဘယ်အရပ်ကလိင်တူအပြန်အလှန်အမေ၊အစ်မနဲ့မောင်နှမဝမ်းကွဲ။ ရဲ့မေ့လျော့တော်မကြစို့တပြင်လုံးကိုအသစ်၏အုပ်စု RPGs ကြောင်းထွက်လာမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း။ သူတို့ထဲကတချို့ကအားကစားအတွက်စိတ်ကူးယဉ်လောက၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် Skyrim။ ရော်ဂိမ်းများများမှာလည်းအလွန်လူကြိုက်များ။ နှင့်တူသောများရဲ့ကစားပွဲ၊ရိုက်သံ၊Overwatch။, ကျွန်တော်လည်းလေ့လာကြည့်ယူပြီးအကြံပေးမှာကမ္ဘာ၏Whorecraft လျှင်သင်၏ပရိသတ်တစ် Blizzard။ ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောတင်နှင့်အတူအပူဆုံး XXX အရေးယူသင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အတွက်ဂိမ်း!
ဒီနေ့ခေတ်၊အများကြီးရှိပါတယ်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောဂိမ်းဆောင်ခဲ့တစ်ဦးဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ်အခြားဘာမှမကိုပျက်စီးစေနိုင်ကြောင်း။ ကိုသိလိုကြောင်းကျွန်တော်အမြဲစစ်ဆေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းညမ်းဂိမ်းများနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်နှင့်သေချာအောင်အရာအားလုံးကိုကျနော်တို့အကြံပြုပါသည်င်လုံးဝ Malware သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့် nefarious။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့သည်အလွန်အပျနှံထားသောသင်ပေးရန်နှင့်အတူအကောင်းဆုံးဂိမ်းရရှိနိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒေါင်းလုပ်အရာအားလုံးကိုသင်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်နှင့်ပြေးမျိုးစုံဖြင့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကင်နာဖို့သေချာအောင်ဘာမှမရရှိသွားတဲ့ကြောင်းမှတဆင့်အသကျကိုမရမနေသင့်။, သို့သော်၊ကျွန်တော်ပြောချင်သောအကြောင်း၏၂၅%ဂိမ်းဒီနေရာမှာအကြံပြုအပ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခံရဖို့။ အချို့ဂိမ်းများကိုဆက်ကပ်အရာက္ဇာရွေးချယ်မှုနှင့်လည်းပြေးကင်းစင်စွာရှိပါတယ်။ ဂရပ်ဖစ်၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲဖြစ်မည်မဟုတ်ပါအဖြစ်အကောင်းနဲ့အဘောင်နှုန်းနိမ့်စေခြင်းငှါ၊ဒါပေမယ့်ကောင်းတစ်ဦးအသင်ချင်ကြဘူးဆိုရင်ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ။ ဒီတော့ဟုတ်ကဲ့၊သင်အဘို့အရှာကြသည်ရာက္ဇာညမ်းဂိမ်း–အများအပြားရှိပါတယ်ညမ်းသောကျနော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီနှင့်နှုန်း၊နှင့်သင်ချစ်တိုင်းတစ်ခုတည်းအခမဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲ!, ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကြောင်းပြောဘေးကင်းလုံခြုံဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူအဆင့်သတ်မှတ်။
အကြီးမားဆုံးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုမှာကစားသမားများ၏အွန်လိုင်းညမ်းဂိမ်းသည်သူတို့စားနေကြသည်အပြာဂိမ်းကိုအောက်တွင်တစ်ခုကာမဂုဏ်နှင့်ပျြောအဆင့်။ ကျနော်တို့ဝန်ခံဤသည်အမှန်တကယ်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာနှင့်အတူအများအပြားအခမဲ့ဂိမ်းများ၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့လံုးအကွောငျး ၃၀%အဆိုပါဂိမ်းကျနော်တို့စောင့်ကြည့်။ ဒီကိုဆိုလိုသည်သင်သာရစသောတကယ့်တန်ဖိုးရှိများမှာ။, ဂိမ္းအတြက္-အရွယ်ရောက်ပြီးများသောအားဖြင့်ကြီးမားတဲ့ဘတ်ဂျက်နှင့်လည်းအများကြီးပိုကောင်းအသင်းများထုတ်လုပ်ရန်သော၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များ၊ငါတို့မူကား၊အရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကမ္ဘာကြီးကကိုယ့်အကောင်းအဖြစ်-အထူးသဖြင့်ဆိုရင်သွေးကြော။ ကျွန်တော်တို့မကြာခဏတွေ့လျှင်အခက်လိုလေဖြတ်ခြင်း၊ထို့နောက်အရည်အသွေးအခမဲ့ဂိမ်းများကိုသေချာပေါက်မရေးကြီးဆုံးအရာသင်တို့အဘို့အ–အဆိုပါဂရပ်ဖစ်! အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်လေ့ရှိပါတယ်ဂရပ်ဖစ်အခမဲ့ဂိမ်းကျနော်တို့အကြံပြုပါသည်။, အဆိုပါဂိမ်းကိုကြည့်ကောင်းရှုကောင်းမှတဆင့်ရ။ လူတွေကအလွန်အာရုံစိုက်ဂရပ်ဖစ်အပေါ်၎င်းရဲ့ကြီးမြတ်ရှာတွေ့မှအံ့သြဖွယ်ဂိမ်း၊ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာအားလုံးဂိမ်းအဖြစ်ဖို့ပျော်စရာကနေကြည့်၏။ ကြီးစွာသောအရာကအွန်လိုင်းလိင်ဂိမ်းများသင်တော်တော်အများကြီးကိုအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီး။ ဒါကဘာကြောင့်ဤမျှလောက်များစွာသောလိင်မြင်ကွင်းများသငျသညျအတွက်အနှံ့လာကအွန်လိုင်းလိင်ဂိမ်းများကြည့်ရှုဒါကြောင့်စိတ်ကူး! ကွန်ပျူတာထုတ်လုပ်ပြီးအမျိုးသမီးများမှာလည်းရိုက်နှက်ဖို့ခက်လျှင်၊ကျွန်တော်တို့ကိုမေးမြန်း!
ရှိပါတယ် VR ညမ်းသောကြသည်တန်ဖိုးရှိကြည့်?
ကျွန်တော်တို့နှုန်းဤမျှလောက်များစွာသော VR ညမ်းသောကျွန်ုပ်တို့သည်အခက်အခဲရှိကိုစောင့်ရှောက်နှင့်အတူတက်များ၏စဉ်ဆက်မပြတ်စီးဆင်းသစ်ညမ်းဂိမ်း! ကံမကောင်းစွာပဲ၊ကိုသာတစ်ဦးလက်တဆုပ်စာ၏ဤဂိမ်းအမှန်တကယ်ကောင်းသော။ ကျနော်တို့မှာကြည့်ရှုျဖင့္အတက်အဆုံးသတ်သင့္ရဲသာအနည်းငယ်မှာအချိန်။ သတင်းကောင်းဖြစ်ပါသည်အကောင်းဆုံးကို VR ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များအားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်။ ကိုရှာနေလျှင်ဒါကြောင့်သင်လိင်များအတွက်သာတစ် VR ဂိမ်း၊ထို့နောက်သင်သည်လက်ျာအရပ်မှလာ! ကြည့်ထိပ်မှာကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စာရင်းအောက်ကိုဆင်းသည်အထိသင်မြင်ကိုစုဆောင်း၏ကြီး VR ဂိမ္းပြီး။, ဒီနေရာတွင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အဆိုပါကောင်းသော။ ပါကတိုင်း VR ညမ်းဂိမ်းအမည်အားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်လူသုံးထေူ။ ဒါကြောင့်ခင်ဗျားပဲကစားပုံမှန် ၃D ဗားရှင်းနှင့်ဟန်အဆိုပါဂိမ်းသည်ကြီးလှပေ။ ကျွန်တော်တို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောသူလူအတော်များများနိုင်မှုနှုန်းသည်ဤအရပ်၊အခါဒါပေမယ့်သူတို့ပြုပါ၊သူတို့အကြံပေးရန်အကြံပြုသူတို့တစ်တွေကြီးမြတ်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူဒါကြောင့်။ ရေတိုအတွက်စောင့်ကြည့်နေတာပါလျှင်သင်အဘို့အပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအကောင်းဆုံးဂိမ်းများ၊ထို့နောက်သင်သည်လက်ျာအရပ်မှလာမယ့်။ ငါတို့သည်သင်တို့ပြီးပြည့်စုံသောဂိမ်းသင်တို့အဘို့အ။
သင်ပေးပို့နိုင်ပြီးအီးမေးလ်နဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြ၏။ ကျနော်တို့အမြဲရှာဖွေနေသောသူလူများအတွက်အသိအမှတ်ပြုရန်ကောင်းသောအပြာအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားသည့်အခါသူတို့သူတို့ကိုမြင်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်စုဆောင်းဖို့အကောင်းဆုံးလူအဘို့ဤအလုပ်။ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သောအရာကိုယူညမ်းနှုန်းကိုအွန်လိုင်းဂိမ်း၊သင်၏အစိတ်အပိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကနောက်အချိန်အတွက်။ ဒါကအားလုံးဖွင့်! ကျေးဇူးသင်တို့အဘို့အအချိန်ယူဖတ်ရှုဖို့ဤအချက်အလက်အပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအများအမျိုးမျိုးသောအွန်လိုင်းဂိမ်း။, သငျသညျကျိန်းသေအချို့ကြိုးစားသည်ဤကြီးစွာသောညမ်းကစားပြိုင်ပွဲအွန်လိုင်း! မရှိခဲ့ဖူးတဲ့ပိုမိုကောင်းမွန်ခံစားဖို့အချိန်ထိုကဲ့သို့သောဂိမ်းများ။ ဒါကြောင့်ပြင်ဆင်သင့်ရဲ့ကြက်နှင့်မွေ့လျော်ဤရွေ့ကားပူပြင်းတဲ့ကဂိမ်းယနေ့။